ရန်ကုန် လည်ပြန် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ရန်ကုန် လည်ပြန်	Posted by mm thinker on May 29, 2008
Posted in: Article, Experience, Nargis.	Tagged: Experience, Nargis.	Leaveacomment
မည်သည့်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာမှ အသုံးပြုတော့မည်မဟုတ်သော စနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းတွေကို လာသယ်တာတွေ့ရသည်။ ပစ္စည်းတင်နောက်တွဲကို ကားဖြင့် မဆွဲဘဲ ကုလားတွေ လန်ခြားဆွဲသလို လူတွေက ဆွဲလာခြင်းဖြစ်သည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ဖြတ်တော့ `သံရုံးထောက်ခံစာပါလား´ဟူသော အူကြောင်ကြား မေးခွန်းကို မေး၏။ `သံရုံးက ဘာကို ထောက်ခံရမှာလဲ´ ဟု ပြန်ပက်တော့မှ ငြိမ်သွားသည်။ (ကျနော်စီးသည့် လေယာဉ် ရန်ကုန်မှ အခွာတွင် တစ်ယောက်ကို ဆွဲသွားသည်ဟု လေယာဉ် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။)
လေဆိပ်အထွက်မှာ မီးရောင်က ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်။ တက်စီသမားက တစ်သောင်းတောင်းသည်။ သူငယ်ချင်းက ကြိုပြောထား၍ လေးထောင်ဟု ဖမ်းဆစ်လိုက်တော့ ထိုဈေးနှင့် တည့်သွားသည်။ ဒါတောင် ကားမထွက်သေးဘဲ နောက်ထပ် ပါဆင်ဂျာ ရှာနေသေးသည်။ ကဲပါလေ နားလည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟု သဘောထားကာ နာရီဝက်လောက် စောင့်ပေးလိုက်ရသည်။ ကားစထွက်တော့ ဒီဇယ်ဈေး၊ ဓာတ်ဆီဈေးမေးရင်း ကားသမား၏စကားက ညဉ်းချင်းသို့ ရောက်သည်။ ပထမလေယာဉ်ဆိုက်တာ ပါဆင်ဂျာ မရလိုက်ပါတဲ့။ မကြာခင် CNG ကို တစ်ညလုံး တန်းစီရပါမည်တဲ့။ ကျနော်သွားချင်သည့်နေရာ အဝေးကြီးအထိ လိုက်ပို့မည်ဆိုကာ ဈေးဖြတ်သည်။ မများသော်လည်း မနက်ကျမှ သွားလို့ရသော ခရီးဖြစ်၍ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲ အိပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့ ဆရာ့ထံအီးမေးလ်ပို့သောအခါ ‘The City just after War”ဟု ရန်ကုန်ကို သရုပ်ဖော်ပေးလိုက်သည်။ သင်ကာ
← ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း….	စာကြည့်တိုက် မဖြစ်လိုက်ရတဲ့ နံရိုးပြိုင်း အဆောက်အအုံကြီး →	0 comments on “ရန်ကုန် လည်ပြန်”
စိုးထက် - Soe Htet ! on May 29, 2008 at 9:34 pm said:
Reply	t on May 29, 2008 at 9:42 pm said:
Oh,,,may be! That make dicourage!😦
Reply	ဟန်သစ်ငြိမ် on May 29, 2008 at 9:48 pm said:
Reply	heartmuseum on May 31, 2008 at 2:16 am said: